Fardaha Mareykanka: noocyada ugu waaweyn ee asal ahaan ka soo jeeda Mareykanka | Fardaha Noti
Fardaha Mareykanka: noocyada ugu waaweyn
Jenny monge | | Weerar ama Adkaysi, Fardaha fardaha
Kahor intaanan ka hadlin fardaha Mareykanka, bal aan wax yar ka garaacno taariikhda sinnaanta Ameerika. Waxaa la ogyahay in gudaha taariikhda hore, Intii lagu jiray Pleistocene waxaa jiray fardo autochthonous ku dhowaad dhammaan Ameerika, iyo in dhulka u dhigma gobolka Pampean uu si gaar ah hodan ugu yahay xayawaanadan.
Laakiin imaatinka bini'aadamka in ka badan 11.000 sano ka hor waxay umuuqataa inay ahayd mid kamid ah qodobada go'aan qaadashada dabar goynta Dhaladka Mareykanka. Waxay noqon laheyd waqti dheer kadib, inta lagu gudajiray qabsashadii Ameerika, goorma guushii Isbaanishku waxay dib u soo celiyeen xayawaankan quruxda badan taas oo ku baahay qaaradda oo dhan laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad. Si tartiib tartiib ah, fardo ka yimid waddamo kale sida Ingiriiska ama Faransiiska, ayaa soo gaarayey Ameerika iyo, jIsbarbar dhigga Isbaanishka ee horay u degganaa dhulka Mareykanka, waxaa abuurmay noocyo cusub; Fardaha Mareykanka.
1 Qabyo kareemka Mareykanka
3 Faraska Buckskin
4 Faraska Creole
5 Bangiyada Bannaanka Dibadda
6 Faraska Paso ee Purev
7 Mile Quarter
11 Pinto Mareykan ah
12 Polo Argentine ah
13 Faras buur dhagax ah
14 Mareykan murugo leh
15 Kursiga Argentino
16 Socodka Tennessee
Qabyo kareemka Mareykanka
Qabyo Qoraalka Kariimka Mareykanka, ayaa ah nooca kaliya ee faraska qabyada ah ee laga sameeyay Mareykanka maanta jira. Waxaa loo aqoonsan yahay astaamihiisa dhogorta midabka kareemka leh ama champagne dahab ah, oo loogu talagalay indhaha cad.
Iyada oo la farsameynayo shaqada beerashada, tijaabooyinka noocani waxay si aad ah hoos ugu dhacday dhowr iyo toban sano ka hor 1982, markii la ogaaday in cawdu lumin karto. Tan iyo markaas way sii kordheysay Tirada diiwaangalinta Kareemka Mareykanka ayaa u dhiganta (diiwaanka nooc ayaa la abuuray 1944), in kastoo weli waa tiro yar.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah fardo ugu fiican adduunka in lagu safro masaafo dheer, si fudud ayaa loogu kala sooci karaa iyada dhogorta qaaska ah, Waxay leedahay meelo mugdi ah oo ku dhex milmay maqaarka casaanka waxayna keentaa maqaarka xarkaha leh.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista qadiimiga ah, waxaa la sheegay in tan isirku wuxuu ka yimid qaaradda Aasiya waxaana ku soo bandhigay Ameerika Isbaanishka laga bilaabo qiyaastii 1519.
Magaca "Appaloosa" waxay ka timaaddaa Wabiga Palouse, in dhex maray dhulalkii Nez Perce Hindida. Dhaladani waxay ahaayeen kuwa daahfuray dabeecadda wanaagsan, sharafnimada, xoogga iyo isweydaarsiga weyn ee isbarbar dhigaas oo leh jaakad qaabeysan oo qeexan. Waxay ahayd faraska ugu habboon ee waxqabadyada Nez Perce, sida ugaadhsiga ama dagaalka, sababtaas awgeed waxay bilaabeen inay tarbiyaan oo ay ku liitaan.
Laga soo bilaabo iskutallaabta u dhaxaysa faraska Appaloosa iyo faraska Carabta, AraAppaloosa ayaa ka soo baxa. Qaarkood Cadaadiska sare wuxuu lamid yahay kuwa aad ugu habboon fardaha lo'da, tartamada orodka iyo duullaanka.
Iyada oo dhererkeedu u dhexeeyo 142 cm iyo 152 cm, noocani wuxuu ka yimid Appaloosa wuxuu leeyahay qaababka la sifeeyay iyo muuqaalka tartanka Carabta, oo leh madax yar, dabo sare iyo dhaqdhaqaaqyo qurux badan, laakiin intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay jaakad caan ah oo lagu yaqaan 'Appaloosa'. AraAppaloosa wuu ka fududyahay kana nadiifsan yahay Appaloosa badan oo ka mid ah Nooca Faraska Quarter.
Faraska Buckskin waa a Nooc Mareykan ah oo hadda lagu dhasho inta badan waxa loo tixgeliyo inuu ka soo jeedo asal ahaan: California. Waa nooc adag, xoog leh oo adkaysi leh, oo aad ugu habboon shaqada cowboy.
Waxay isku mid yihiin dherer u dhexeeya 145 cm ilaa 155 cm, oo ah jidh is haysta oo isu dheellitiran, oo leh qaabab wareegsan. Waxay leedahay addimo gaagaaban oo dhuuban, in kasta oo ay adkaysi badan tahay.
Dhogoroodu waxay u egtahay midabyo jaalle iyo casaan leh, ahaansho jaakaddiisa madaxa khafiif ah. Astaamaha Buckskin waa inay leeyihiin dabada iyo madaw madow, sidoo kale Khad, caadi ahaan ganaax, sidoo kale madow dhabarka ayuu ka socdaa marka ay engegaan ilaa dabada.
Faraska Creole waa a sinnaanta equine waa astaanta Koofurta laakiin loo qaybiyey Ameerika oo dhan, inkasta oo ay si hormar leh ugu horumartay mid kasta oo ka mid ah dalalka qaaradda. Sannad kasta waxaa jira kuwa badan oo kor u qaada, waxay u adeegsadaan labadaba howlaha adag ee ka socda berrinka iyo xilliyadooda firaaqada.
Qabiilooyinka koonfurta Chile iyo aagga cordilleran waxay aadeen bannaanka bari oo ay soo jiiteen fardaha duurjoogta ah ee deggan, waxayna bilaabeen inay u kaxeeyaan dalalkooda si ay ugu xanaaneeyaan qaab iyaga u gaar ah. Isbarbardhigyadan ayaa u xuubsiibtay la qabsashada bey'adda ay ku noolaayeen oo lagula tallaabay noocyo kale illaa ay ka heleen faraskii Creole ee hadda jira. Waa xayawaan rustic ah, oo leh xoog iyo muruqyo badan oo yeelan kara nooc kasta oo jaakad ah.
Noocii faraska Creole wuxuu ku sigtay inuu lumo taranka taranka oo la dayacay imaatinka jilayaal cusub, adeegsiyo cusub, iwm. Laakiin gudaha 1910, Qeybta Farsameeyayaasha Faraska ee Chile waxaa laga abuuray Chile, soo kabashaduna way bilaabatay oo ku hoos qoran diiwaanka abtirsiinta faraskii Creole asalka ahaa.
Bangiyada Bannaanka Dibadda
Faraska Bananka Dibadda waa nooc ka mid ah Faras duurjoog ah in ku nool jasiiradaha Bangiyada Dibadda ee North Carolina. Xoolaha waxaa laga heli karaa Jasiiradaha Ocracoke, Shackleford Banks, Currituck Banks, iyo Rachel Carson Estuarine Sanctuary.
Farac Isbaanish ah, waa faras faras ah oo duurjoog noqon kara ka dib markii ay ka badbaadaan burburka markabka ama laga tago ama ka baxsado qaar ka mid ah safarada uu hogaaminayo Lucas Vázquez de Ayllon ama Sir Richard Grenville.
Waa fardo yar, adag oo dabacsan dabeecad ahaan in Waxay la qabsadeen nolosha jasiiradaha oo ay dhex dabaalanayaan iyagoo raadinaya biyo macaan iyo caws cusub.
Faraska Paso ee Purev
Faraska Paso ee Paso waa a isirka, sida magaca ka muuqata, laga bilaabo Peru. Waa isir lagu yaqaan in ka badan afar qarni iyo inuu ku soo barbaaray dalal kale oo ka tirsan Koonfurta Ameerika sida Kolombiya ama Puerto Rico, iyo waliba Maraykanka.
Iyada oo dhererkeedu yahay qiyaastii 145 cm, waxaan wajaheynaa a Dhexdhexaad ilaa faras yar, oo leh isafgarad leh, ballaaran oo muruq leh. Xubnahooda, inkasta oo ay gaaban yihiin, aad bay u xoogan yihiin. Qoorta, oo si wanaagsan loogu dheelitiray jirka intiisa kale, waxay ku egtahay madax ballaaran oo fidsan oo leh indho aad u muujiya.
In kastoo aan ka heli karno ku dhowaad dhammaan noocyada lakabyada, midabka laabta iyo xabadka ayaa ku badan dhogorta.
El Faras rubuc ah ama Faraska rubuc, waa nooc fardo ah asal ahaan ka yimid Mareykanka gaar ahaan ku habboon tartamada gaagaaban, gaar ahaan kuwa 402 mitir u jira halka ay magaceeda ka hesho. Waxaa la sheegay in ay tahay faraska kuwa lo'da iyo beeraleyda ah ee ku nool kuna dhinta fardahooda. Ahaanshaha heer sare sida faraska lo'da iyo dhammaan noocyada tartamada iyo bandhigyada la xiriira rodeos.
Waa nooc faras ah oo leh xayawaanka ugu diiwaan gashan adduunka, in ka badan 4 milyan, tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah noocyada sinnaanta ugu caansan.
Rubuca hadda waa gaaban yahay (inta udhaxeysa 143 cm ilaa 160 cm) waana mid adag, oo leh murqo dhismo iyo laabta weyn oo balaaran. Waxay leeyihiin mid isboorti weyn iyo karti shaqo, iyagoo caan ku ah soonkooda oo bilaabma, awooddooda marba marka ka dambaysa iyo joogsiga, xawaaraha ay ku socdaan masaafada gaaban, caqligooda iyo dhaqankooda wanaagsan.
Taranka Morgan waa mid ka mid ah noocyadii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'equine breeds' ee laga sameeyay Mareykanka. Sidaa darteed, ayaa saameyn ku yeeshay qaar badan oo ka mid ah jinsiyadaha dalka, sida Faraska Quarter, Tennessee Walking Horse ama Standardbred Horse. Maxaa intaa ka badan, waxaa loo dhoofiyay dalal badan intii lagu jiray qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Labadaba gudaha Mareykanka, sida Yurub iyo Oceania, tarankaani waa la soo saaray lana horumariyey. Sannadkii 2005, in ka badan 175.000 fardo Morgan ah ayaa lagu qiyaasey adduunka oo dhan.
Nooca Morgan wuxuu caan ku yahay gobolada Vermont iyo Massachusetts. Waxay ku saabsan tahay sinnaanta is haysta oo la safeeyey leh dhogor, caadi ahaan, madow ama bunni, inkasta oo ay soo bandhigi karaan lakabyo kala duwan, oo ay ku jiraan pint. Aad bay u yihiin caan ku ah wax soo saar badan oo loo adeegsaday culuum kala duwan. Waxay sidoo kale ahaayeen dagaal-yahanno intii lagu jiray Dagaalkii Sokeeye ee Mareykanka.
Sidaan horeyba ugu aragnay Appaloosa, Markay ka gudbayaan Moorgan faraska carabta waxaa soo baxaya mooryaan cusub. Ujeedada laga lahaa abuurista fardaha fudud ee fudud oo waliba awood u leh inay qabtaan shaqada beeraha, waxay bilaabeen inay ka gudbaan labadan nooc. Laga soo bilaabo 1880. Ma noqon doonin illaa 1973 markii faraskii ugu horreeyay ee Morab la diiwaangeliyo, kahor taariikhdan ka hor waxay ka diiwaangashan yihiin diiwaanka noocyada Morgan.
Marka la isku daro xarrago iyo awood, Morab-ka hadda jira waa mid aad u badan ku habboon tartamada bandhig soo jiidashada. Intaa waxaa dheer, iyada Dabeecad wanaagsan Waa astaan ​​wanaagsan oo loogu talagalay raacitaanka firaaqada iyo faras shaqo oo dhexdhexaad ah.
Dabcan, kama maqnaan karaan fardaha duurjoogta ee Woqooyiga Ameerika: The mustang ama mustangs. Noocan loo yaqaan 'equine breed' ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah adduunka ugu quruxda badan. Lakabyadooda, waxay ku soo bandhigi karaan noocyo badan oo hoos ah, si kastaba ha noqotee, sjaakad aad u dabeecad badan waa kan Wuxuu isku daraa midabada buniga ah iyo buluugga buluugga ah, taasoo xayawaanka siisa dhalaal gaar ah. Jaakadani waa mid si hufan uga mid ah astaamaha bilicsanaanta ugu qiimaha badan fardahaas.
Aad baa loogu qaddariyaa iska caabbintooda weyn iyo xooggooda, waa tusaaleyaal is haysta oo leh dherer u dhexeeya 135 cm iyo 155 cm. Isaga dabeecad kacsan oo gabi ahaanba madax banaan waa dabeecad fardaha bahalka ah.
Xaqiiqdii, iskudhafyadan ayaa ku bilaabmay sidii fardo weyn, xayawaanka la jaanqaaday duurka, ka dib markii ay baxsadeen ama la siidaayay sababo jira awgood. Bannaanka baaxadda leh ee Mareykanka iyo maqnaanshaha ugaarsato dabiici ah ayaa gacan ka gaysatay ballaarintiisii ​​degdegga ahayd. Maanta waxay halis ugu jiraan dabargo ’.
Faraska Nokota waa a nooca maroon iyo semi-maroon equines kaas oo asal ahaan ka soo jeeday dhulka xun ee Teodoro Roosevelt National Park.
Astaamaha astaamahan ayaa ah kan kaliya ee ay tahay dhogorta roan-buluug ah waa mid aad u badan, marka lagu daro madow iyo cawl. Calaamadaha guud sida dhogorta cad ayaa sidoo kale laga heli karaa qaar ka mid ah khadadka dhalmada ee wejiga iyo xagjirnimada.
Isbarbardhigyada ugu horreeya ee noocani waxay ahaayeen xoolo duurjoog ah oo go'doomay markay ka guurayaan Dakota.
Waa nooc leh a la qabsiga weyn ee xaaladaha xun, agile iyo caqli badan, muuqaalada ka caawiyay inay sii noolaato. Maaddaama ay ahaayeen tartan ay isku dayeen inay baabi'iyaan.
Maanta fardaha Nokota ku nool Teodoro Roosevelt National Park, la nool faras guri si ula kac ah loogu baray jardiinada, iyo shabakad isugu jirta seerayaal iyo beero ku hoos jira gacanta Daryeelka Faraska Nokota (NHC). Ujeedada NHC waa in la ilaaliyo asalka noloshii Nokota iyo in la taageero fardahaas reer Nokota.
Pinto Mareykan ah
Ku dhashay sida "Faraska Hindida" maadaama ay ahayd Comanche Indians, iyo Redskins oo xushay adeegsiga tusaalooyinkaan quruxdooda iyo midabkooda, kartidooda iyo iska caabin weyn.
Markay ahayd 1800, bannaanka galbeedka Mareykanka waxaa ku noolaa dad xoolo duurjoog ah oo fardooley ah, in waxay noqdeen isha sinnaanta ee Hindida Mareykanka. Waxay noqon lahayd Hindidaan Mareykanka ah ee waxay ku bilaabeen taranka tarankaas, raadinta duurjoogta iyo astaamaha ugu wanaagsan ee lagula soo gudbo fardo Isbaanish ah.
Natiijadu waxay ahayd fardo is haysta, oo leh murqo aad u qeexan, lagu gartaa isagoo leh madax yar oo fidsan, qoorta oo dheer iyo lugaha oo gaaban oo aad u adag. Waxay ahaayeen fardo xoog iyo iska caabin badan.
Maanta, qaar badan oo ka mid ah fardahan ayaa hidde ahaan lagu xoojiyaa iyagoo ku gudbaya iyaga oo wata nooca Quarter-Mile, si kor loogu qaado awooddooda jireed xagga xawaaraha iyo adkeysiga.
Polo Argentine ah
Faraska Polo ee reer Argentine waa nooc loo yaqaan 'equine breed' oo laga soo saaray waddanka Argentina oo loogu talagalay ku dhaqanka Polo. Ingiriisku wuxuu polo u keenay Argentina 1890 isagoo keenay fardo ay ku ciyaaraan isboortiga. Reer Argentine waxyar kadib waxay noqdeen kuwa jecel ciyaartan. 1920-meeyadii ciyaartoy badan oo caan ah ayaa bilaabay inay adeegsadaan kaliya fardaha Creole ujeedkan. Polo reer Argentine, Waxay ku dhalatay isgoyska Fura Sangre de Carrera oo leh fardaha dhulka ee carriga.
Faraska Polo ee reer Argentine waxaa lagu gartaa inuu yahay iska caabin weyn iyo xawaare, labadaba hidde ahaan iyo tababar ay helaan awgood. Fardaha Polo waxaa loo tababaraa dhowr sano ka hor inta aysan gaarin tayada lagama maarmaanka u ah inay ciyaaraan.
Muhiimadda taranka tarankaani waxay ku jirtaa firfircoonidiisa iyo jilicsanaanteeda, iyadoo laga tagayo dhinacyada bilicsanaanta oo badan. Waa tijaabooyin jir caato ah, qoor dheer iyo addimo adag oo ku habboon horumarinta cayaarahaan.
Faras buur dhagax ah
ka "Rocky Mountain", sida magaca ka muuqata, waa asalka ah ee buuraha Rocky ee Mareykanka. Fue qiyaastii qarnigii XNUMXaad, markii qof yar oo loo yaqaan 'equine' uu ka soo muuqdo dhulalka bari ee Ketucky, waxay noqon doontaa muunadani oo la bilaabi doono in loogu yeero "Faraska Buuraha Rocky" iyo kan aabbe u noqon doona noocan si aad looga mahadceliyo Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Shaki la'aan, mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee Buurta Rocky waa dhogorteeda. Sida mustang-ga, waxay u istaagaan mid gaar ah kaas oo matalaya nooca, inkasta oo ay dabooli karaan ku dhowaad midab kasta oo adag oo ka mid ah jaakadaha. Koodhadhkan quruxda badan ee quruxda badan ee aan tixraacno, ayaa ka kooban Shukulaatada shukulaatada jirka, manka timo cad leh iyo dabada timo cad leh oo leh codad lacag ah.
Sababta kale ee loo yaqaan 'taranka' ayaa loo yaqaan ama u taagan yahay, marka lagu daro dabeecaddiisa wanaagsan, waa iyada oo ay ku raaxeysato shirkadda aadanaha, illaa heer ay la mid yihiin eeyaha.
Mareykan murugo leh
Mareykan ama Mareykan ayaa calool xumaaday, sidoo kale loo yaqaan American saddle ama Mareykan ah, waa faras farac ka soo jeeda Mareykanka. Waa loo yaqaan show ganaax jiido faras. Waxaa jira laba qaybood oo bandhig ah: kuwa leh seddex tallaabo (socod, maroojin iyo canter) iyo kuwa leh shan tallaabo, kuwaas oo marka lagu daro tallaabooyinka socodka ee caadiga ah ee lagu daray qeybtii hore, waa inaan ku darnaa santuuqa iyo tallaabada gaabiska ah.
Iyada oo dhererkeedu u dhexeeyo 150 cm ilaa 160 cm, tarankaani wuxuu ahaa waxaa abuuray iyadoo laga talaabayo Thoroughbreds, Standardbreds iyo Morgans oo leh maareyaal maxalli ah waxay lahaayeen tallaabo fudud. Waxay leedahay hooska jaakadaha oo ku kala duwan madow, baay, bunni, bunni ama cawl.
The Silla Argentine, wuxuu bilaabay in lagu qoro diiwaanka Silla Argentino laga soo bilaabo 1941, maxaa yeelay waxaa jiray sinaan weyn oo ku jirtay tijaabooyinka ka soo baxay lo'da la xushay, iyadoo wixii bilaabay inuu noqdo isir qeexan
Laga soo bilaabo tarankaan waxaan ku muujin karnaa dabeecaddiisa firfircoonaa oo firfircoon, aad ugu habboon ciyaaraha iyo sidoo kale qaab-dhismeedkeeda. Waa qaab dhismeed adag oo u dhigma, mug iyo miisaan dhexdhexaad ah. Koodhkeeda, oo si muuqata u siman oo jilicsan, wuxuu noqon karaa xabadka, xabadka ama tordillo.
Faraska Socodka ee Tennessee, oo sidoo kale loo yaqaan Tennessee Paso Horse, Waa faras faras ah oo ka soo ifbaxay koonfurta Mareykanka.
Noocan farasku waa si ballaaran loo aqoonsan yahay inay ku habboon tahay nooc kasta oo shaqo ah, laga bilaabo jiidayo barkimada, oo ah gaadiid ahaan. Badanaa waa nooc ay ku xisaabtamaan beeralaydu.
Mid kale oo ka mid ah xirfadaha weyn ee Socodka Tennessee, waa talaabadaada. Dhaqdhaqaaqa xayawaanka waxaa sameeya xusulka. Waa kuwo iswaafajinaya iyo dhaqdhaqaaqyo qaafiyad leh, siinta wadaha raaxada ugu weyn ee suuragalka ah iyo u gudbinta dhaqdhaqaaq aad u yar.
The Narragansett Walkers ee Gobolka Rhode Island, ilaa waqooyi-bari ee Mareykanka, iyo fardo Canadian waa awooweyaashan. Abuuritaanka Socodka Tennessee, waxaa la xushay isleegyo ka shaqeynayay beeraha. Waxay lahaayeen astaamo ay si dhib yar ugu dhaqaaqaan xitaa dhul buuraley ah, sifooyin ay ka dhaxli doonaan faracooda
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » kuwa kale » Fardaha fardaha » Fardaha Mareykanka: noocyada ugu waaweyn
Paul coudenys dijo
in yar oo waaweyn oo Mareykan ah ayaa la la'yahay, sida faraska Azteca (Mexico) Mangalarga Marchador (Brazil), Campolina (Brazil), Pantaneiro (Brazil), Creole-ka reer Kolombiya, iwm.
Jawaab Paul Coudenys
Faraska Criollo: astaamaha, taariikhda iyo soo kabashada